Maro ireo mpampiasa aterineto manana fahasembanana no mahita tranokala sarotra na mety tsy ampiasaina tsotra fotsiny noho ny fomba noforoniny.
Ity tranonkala ity dia natao mba hahitana azy araka izay azo atao ary mba hifanaraka amin'ny karazana teknolojian'ny adapta ampiasain'ny olona manana fahasembanana, anisan'izany ny mpamaky azy.
Noho izany, ireo mpitsidika dia afaka mifehy ny habetsaky ny lahatsoratra, ny loko, ny stylesheets ary ny mampiasa ny 'lakile fidirana' eo amin'ny klavier fa tsy ny totozy hivezivezy amin'ny pejy.
Fitaovana an'ity tranonkala ity
Mba hivezivezena amin'ny alalan'ity tranonkala ity, azafady ampiasao ny menio eo an-tampon'ny pejy. Raha mampiasa ny mpamaky azy ianao, dia azonao ampiasaina ny alim-pandrefesana Alt - M (tsindrio ny fidirana), izany dia hitondra anao any amin'ny loha-maina, izay azonao ampiasaina ny fanalahidin'ny tabilao mba hivezivezy amin'ny rohy.
Azonao atao ny manova ny haben'ny endritsoratra amin'ity rakitra ity amin'ny safidinao amin'ny alalan'ny navigateur. Ao amin'ny Internet Explorer, Safidio ny View, dia ny Text Size, ary avy eo ny habeny tianao.
Azonao atao ny mametraka ny mombamomba anao ao amin'ity tranonkala ity. Ao amin'ny Explorer, kitiho ny Tools, safidy Internet, ary avy eo amin'ny tabilao 'General', mifidiana Accessibility. Tsindrio manaraka ny sila-panalahidy telo na telo hafa mba tsy hijerena ny loko, ny endri-tsoratra na ny habeo. Ao amin'io fikandrana io ihany no ahafahanao manova ny mombamomba anao amin'ny alàlan'ny tsindrio ny kisary milaza hoe, 'rakitra tahadika mampiasa ny stylesheet' ary avy eo tsidiho fotsiny ny stylestyle ary tsindrio ok.
Nandinika tsara ity tranonkala ity izahay saingy te hanatsara hatrany ny famandrihana anay ary te hahafantatra raha nahita ity taratasy ity ianao na raha misy olana.
Home Home Sokajy --Threads --Zippers - Ripona & Tape --Ropes --Laces --Buttons --Interlining --Tassel & Fringe / Trimming - Fanampiana fitaovana - Fitaovana & Accessories - Mamboatra machine & Parts --Fabric --Others Momba anay - MH Overview --MH Industrial --- Ny orinasa mpamokatra --- Zava-bozaka & andian-tavoahangy --- Hazo fijinjana - Nahoana isika no mifidy antsika? --MH Tantara --Trade Shows --Image Galleries --Video Album MH Culture - Sarobidy --MH Dreams - Adidy amin'ny asa sosialy Mifandraisa aminay - Toerana mahomby - Fitoriana toerana --Shop Location --Feedback Community --Avia ho namanay --News